တစ်ကျော့ နှစ်ကျော့ … တေးကိုသီ … | Layma's World
တစ်ကျော့ နှစ်ကျော့ … တေးကိုသီ …
Posted on August 29, 2007 by layma
“မောင်လေးရေ … ထပါတော့ … ရောင်နီလာလှပေါ့ … ညီမလေးရေ … ထပါတော့ … ရောင်နီလာလှပေါ့ …”
မောင်လေးရေ … ထတော့လေ … ထပါတော့ … အိပ်ပျော်မနေပါနဲ့ တော့ … ၊ ညီမလေးရေ … ထပါတော့ … အိပ်ပျော်ချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့ တော့ … ၊ ရောင်နီလာနေပြီ … အချိန်ကျနေပြီ … မောင်လေးတို့… ညီမလေးတို့ထသင့်ပြီ …၊ ရောင်နီလာလို့ထရမှာလား… မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ နိုးထလို့ … ရောင်နီလာမှာလား …ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် … ရောင်နီနဲ့…မင်းတို့ နိုးထချင်း …ဒွန်တွဲနေသင့်တယ် မဟုတ်လားဟင်…။“တစ်ကျော့ နှစ်ကျော့ … တေးကိုသီ … ငှက်ကျားနှုတ်ပလီ …”
ကြက်ဖတွန်လို့…ငှက်ကလေးတွေ တေးသီလို့ … ကျီကျီကျာကျာနဲ့ … မင်းတို့ ကို နှိုးနေကြပြီလေ …၊ အိပ်ပျော်နေကြတုန်းလား …၊ ငှက်ကျားလေး တေးပလီနေရတာ တစ်ခေါက်မကတော့ဘူးလေ… အခါခါကျော့ နေရရှာတယ်… ။
“ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ် … မိရယ်ဖရယ် … ဘ၀၀ယ် … စုံစုံညီညီ …”
တို့ တွေငယ်ငယ်တုန်းက တို့ တွေအိမ်မှာ အဖေရယ်အမေရယ် တို့ မောင်နှမတွေရယ် … ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စုံစုံညီညီနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့ စားခဲ့တဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးကို တမ်းတမိတယ်… အဝေးရောက်နေတဲ့ … မောင်လေး…ညီမလေးတွေရယ် …၊ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ … ပြသနာတွေကို အတူဖြေရှင်း … တမိုးတည်းအောက်မှာ တရေတည်းသောက်ခဲ့ကြတာကို မှတ်မိသေးရဲ့လား … ၊ တို့ အိမ်ကို ရန်စလာတဲ့သူတွေကို အဖေကဓါးဆွဲလို့… မောင်လေးကတုတ်ကိုင်ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတော့ အမေနဲ့တို့ ညီမတွေက နောက်ကနေခါးထောက်လို့အားပေးခဲ့ကြတော့ သူတို့ ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်လေ …၊ အခုတော့ တို့ မောင်နှမတွေ တမြေဆီဝေး မင်းတို့ တွေက အဝေးကြီးမှာဆိုတော့ အဖေတို့ အမေတို့ရဲ့အမွေ …တို့ အိမ်လေးယိုင်နဲ့အိုဟောင်းလို့ရောင်းစားခံရတော့မယ် ….၊ အမြန်ပြန်လာပါတော့ … မောင်လေး … ညီမလေးတို့ ရယ် … ။
“ ကျွန်တော်တို့ … ကျွန်မတို့ လေ… ကျွန်တော်တို့ … ကျွန်မတို့ လေ …ချစ်လေသူကို ချစ်လေသူကို …ကိုယ်ကတဖန် ပြန်လည်ချစ်တတ်ကြပါစေသည်…ဘ၀တေးဆိုရင် ခဏလေး…မဆိုချင်…ကျော့ကျော့လွင်မှ အသွင်လှပါလေမည် … ”
မောင်လေး… ညီမလေးတို့ ရေ … ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံ့ နှင်းကြရဘူးနော် … ၊ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကပြန်ပေးဆပ်နိုင်ရမယ် … ၊ ရန်သူကိုလဲ မိတ်ဆွေဖွဲ့ နိုင်ရမယ်နော် … ဒါမှ မင်းတို့ ဘ၀ … အားလုံးဘ၀ …သာယာအေးချမ်းလိမ့်မယ်…၊လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေးပေမယ့် တို့တွေသီကြွေးရတဲ့ သီချင်းတွေက အများကြီးပါ….၊ ပျော်စရာ …ငိုစရာတွေနဲ့ …သံစဉ်တွေ အခါခါကျော့နေရမယ့် လောကကြီးမှာ တနပ်စားတော့ တွေးလို့ မဖြစ်ဘူးနော် …၊ လှပတဲ့သီချင်းလေးတွေ အခါခါကျော့နိုင်ဖို့အတူတူရေးစပ်ကြပါစို့ နော် …။
“ မုန်းတေးတစ်ခါကျော့လျှင် … ချစ်တေး…တစ်ခါ…နှစ်ခါ…သုံးခါ…လေးခါ …အခါခါကျော့စေချင်ပါသည် … …အခါခါကျော့စေချင်ပါသည် …”
မောင်လေး…ညီမလေးတို့ ရေ ….တစ်ခါမုန်းဖူးရင် အခါခါပြန်ချစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ … ၊ တစ်ခါယူဖူးရင် အခါခါပြန်ပေးနိုင်ဖို့စဉ်းစားပါ …၊ တစ်ခါမှားဖူးရင် အခါခါ အမှန်သိနိုင်ဖို့အားထုတ်ပါ …. ။
“တစ်ကျော့ …. နှစ်ကျော့ …ကျော့ကျော့…. တေး….ကိုသီ … ”
Filed under:2in 1 style, Heart touching songs, That's what I wanna say |
« “အပယ်ရတနာ” ၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်… Blog ကဗျာ… »
မျှားပြာ, on August 30, 2007 at 1:31 am said:
အဲဒါ အနော်တို့ လူပျိုတုန်းက သီချင်းပေါ့း))
ထတော့ ထချင်တယ် ကျိုးမှန်း သိသွားမှာစိုးလို့ 
သန့်ဇော်မင်း, on August 30, 2007 at 12:13 pm said:
မမလေးရေ… ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာ ဆိုနင့်နင့်ကြီး ဖြစ်လာတယ်ဗျာ..။ လက်တလော တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ ဆက်ပြီးတွေးမီသွားလို့ထင်တယ်။ လိုရာဆွဲတွေးတာလို့တော့ မထင်နဲ့နော်..။
“ရောင်နီလာနေပြီ … အချိန်ကျနေပြီ … မောင်လေးတို့… ညီမလေးတို့ထသင့်ပြီ “
“တို့ အိမ်ကို ရန်စလာတဲ့သူတွေကို အဖေကဓါးဆွဲလို့… မောင်လေးကတုတ်ကိုင်ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတော့ အမေနဲ့တို့ ညီမတွေက နောက်ကနေခါးထောက်လို့ ”
“တို့ အိမ်လေးယိုင်နဲ့အိုဟောင်းလို့ရောင်းစားခံရတော့မယ် ….၊ အမြန်ပြန်လာပါတော့ … မောင်လေး … ညီမလေးတို့ ရယ် “
“တစ်ခါမုန်းဖူးရင် အခါခါပြန်ချစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ … ၊ တစ်ခါယူဖူးရင် အခါခါပြန်ပေးနိုင်ဖို့စဉ်းစားပါ …၊ တစ်ခါမှားဖူးရင် အခါခါ အမှန်သိနိုင်ဖို့အားထုတ်ပါ ….”
ဘုရင့်နောင်, on August 30, 2007 at 2:05 pm said:
အရေးအသားကော၊ အတွေးအခေါ်ကော အရမ်းကောင်းတယ် လေးမ။
jerry, on August 30, 2007 at 2:33 pm said:
ဒီစာကိုဖတ်တာ တစ်ကျော့နှစ်ကျော့ မကတော့ဘူး ။ ဒီသီချင်းကို ကျနော်ငယ်ငယ်က ရေဒီယိုမှာ မကြာမကြာ ကြားဖူးတယ်။ tv မှာလည်း ကြည့်ခဲ့နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ်ထင်တယ်။
“မောင်လေးရေ … ထပါတော့ … ရောင်နီလာလှပေါ့ … ညီမလေးရေ … ထပါတော့ … ရောင်နီလာလှပေါ့ …” ဒီစာသားလေးကိုပဲ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိတယ်။ ကျန်တာတွေက အမှတ်တမဲ့ပါပဲ ။
ကောင်းကောင်းမမှတ်မိသလို ကောင်းကောင်း မခံစားမိဘူး။ ခုလို မျိုး မတွေးမိဘူး ။ ခု ဒီလို စပ်ဆပ်တွေးပြီး ပါးပါးလေးရေးပြလိုက်မှပဲ တကယ့်ကို ထိထိရှရှ ခံစားရတယ်။ ကျနော် ပိုပြီး ခံစားလို့ရအောင် ဒီသီချင်းကို လိုက်ရှာမိတယ် ။ တလောကမှ ထွက်ထားတဲ့ မြို့မသက်ရှိငုတ်တုတ်ပွဲ အခွေ (ကျနော်ကတော့ live show ကို ဒီလိုပဲခေါ်ချင်တယ် )ထဲမှာ သွားတွေ့တယ်။
ဒါနဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်နားထောင်ရင်းနဲ့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ဖတ်မိတယ်။ မ၀သေးလို့ စာကို နောက်တစ်ခါ ထပ်ဖတ်ပြီး သီချင်းကို နောက်တစ်ခါ ထပ်နားထောင်မိတယ်။ တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ပါပဲ ။ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ။ ကိုသန့်ဇော်မင်း ပြောသွားတာ ဟုတ်တယ်။ ဒီစာကို ဖတ်ပြီး လက်ရှိ အခြေအနေကိုပဲ မြင်ပြီး နိုးကြားမိတယ်။
“ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် … ရောင်နီနဲ့…မင်းတို့ နိုးထချင်း …ဒွန်တွဲနေသင့်တယ် မဟုတ်လားဟင်…။” အဲဒီစာသားကို ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဒီစာက Label မှာဆို thinkings from songs လို့ တောင် ထည့်လို့ရဦးမယ်ထင်တယ် ။သီချင်းဆိုတာ နားထောင်တာချင်တူတာတောက် နားလည်တာချင်းမတူဘူးနော်။ အသံကြားတာချင်းတူတာတောင် ခံစားတာချင်း မတူကြဘူး။
ဒီစာ အတွက် တကယ် ကျေးဇူးဗျာ။ ဂျယ်ရီတော့ ဒီတစ်ခါ မနောက်နိုင်တော့ဘူး ။ ထိမိသွားလို့ဗျ ။ တကယ်ပဲ ။
hninhnin, on August 31, 2007 at 12:44 pm said:
မမလေးရေ… အရမ်းကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောတော့မယ်။ အပေါ်မှာ အစ်ကိုတွေပြောခဲ့ကြတာ ပြည့်စုံနေပြီလေ။ ခုနောက်ပိုင်း တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် ထိထိ မိမိ… အဲဒါ အရမ်းကောင်းတယ်။
Layma, on August 31, 2007 at 5:08 pm said:
မျှားပြာ … ဒီလိုဆိုလဲ နေသာသလိုနေပါရှင် ….။
ကိုသန့် … လေးမ ပေးထားတာတွေကို ရအောင်ယူသွားတဲ့ အတွက်ရော … လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးပါ…။
ကိုဘုရင့်နောင်… မနေ့ က လေးမ မျက်နှာကြက်နဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ပါတယ်… လေးစားရပါသော … မှတ်ချက်ရေးခဲသော …. ကိုဘုရင့်နောင်က အဲဒီလိုလေးရေးပေးသွားလို့ ပါ…..ကျေးဇူး ….။
ဂျယ်ရီ …. သီချင်းရှိတဲ့နေရာပြောသွားတာ ….အခါခါကျော့အောင် ဖတ်သွားတာ….အကြံပေးသွားတာ… အရာအားလုံးအတွက် …. ကျေးဇူးအထူး … ။
နှင်းနှင်း …..ညီမလေးရေ ….ထပါတော့ …အဲ…ယောင်လို့ … ကျေးဇူးနော်..သိုးလေး….ပျော်ရွှင်ပါစေ…။
eithu, on September 8, 2007 at 1:53 am said:
အိက လေးမရဲ့ fan အသစ်ပေါ့.. မအိမ့်ဆီက တစ်ဆင့်လာလည်တာ ^.^
ဒီ စာ လေး ရေးတဲ့ လေးမ ကို ကျေးဇူးတင် ကြောင်းပြောမလို့..
ဖတ်လို့သိပ်ကောင်းတယ် .. အတွေးနဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ရောထားတာ ..
2 in 1 ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ရသလိုပါပဲ.. သိပ်ကြိုက်တာပဲ
လေးမလည်း နွေးထွေးပျော်ရွှင်ပါစေနော် .. ^.^
Layma, on September 8, 2007 at 3:11 pm said:
မအိရေ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. . မအိဆီလာလည်တာ post တွေက multiply မှာနော် … ဟုတ်လား…Blog မှာမတင်ဘူးလား…ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်…။
THS, on August 9, 2008 at 6:49 pm said:
သီချင်းစာသားနဲ့ အတွေး ရောရေးတတ်တဲ့ အစ်မရဲ့ ရေးဟန်ကို သဘောကျတယ် ၊ ဒီပို့စ်ထဲမှာ ပါသွားတဲ့ စကားလုံးတွေ ဟာ အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ် ၊ မေတ္တာဓါတ်တွေ အပြည့်စီးနေတယ် ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မလေးမ ။